Homeसमाचारबैतडीमा वेहुला-बेहुली सहितको जन्ती बोकेको जिप दु’र्घटना, एक जनाको मृ’त्यु
April 26, 2021 admin समाचार 2978
बैतडीमा बेहुला बेहुली सहितको जन्ती बनेकेको गाडी दुर्घ’टना भएको छ । कञ्चनपुरबाट जन्ती बो’केर जाँदै गरेको जिप बैतडीमा दुर्घ’टना भएको हो । बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ६ हिरापुरमा जिप दुर्घ’टनामा बेहुला बेहुली पनि छन् ।
कञ्चनपुरबाट जन्ती बोके’र गएको जिप बैतडीमा जिप दु’र्घटना हुँदा १ जनाको मृ’त्यु भएको छ। दुर्घ’टनामा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडानम्बर ३ का ५५ वर्षीय देवदत्त जोशीको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ६ ग्वाल्लेक घट्टेघाट खोलामा दुर्घ’टना हुँदा अन्य ११ जना घाइ’ते भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ०२००१ ज ३७७ नम्बरको बलेरो जिप सोमबार विहान ५ः५० बजेको समयमा दु’र्घटना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्त’रियाले जनाएको छ। जन्ती लिएर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट गोकुलेश्वरका लागि फर्कंदै गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश ०२००१ ज ३७७ नम्बरको जिप सोमबार बिहान करिब ५ बजेर ५० मिनेटमा दु’र्घटना भएको प्रहरीले जना’एको छ।
दुर्घ’टनामा दुलहा, दुलहीसहित ११ जना घा’इते छन्। घाइ’तेमध्ये दुई जनाको अवस्था ग’म्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक किशोरसिंह ऐरले बताए। दु’र्घटनाको कार’ण खुलेको छैन। घट’नाबारे थप अनुस’न्धान जारी छ।
यता रुपन्देहीमा पनि जन्ती बोकेका बस दुर्घ’टना भएको छ । जन्ती हिडेको बसलाई रुपन्देहीको को’टीहवामा टिपरले ठ ‘क्क र दिँदा दुई बालिकाको मृ’त्यु भएको छ। दुर्घ’टनामा अन्य ६ जना घा’इते भएका छन्। आइतबार दिउँसो भैरहवाबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको लु १ ख ९६८५ नम्बरको जन्ती बसलाई टिपरले ठ’ क्क र दिएको हो ।
लु १ ख ६०६४ नम्बरको टिपरले पछाडिबाट ठ’ क्क र दिँदा दुई बालिकाको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । टिपरले ठ’ क्क र दिएपछि हुत्ति’एको बसले जन्ती बोकेकै अर्को लु १ ख ५७८८ नम्बरको बसमा ठो ‘क्कि न पुगेको हो । ठो’क्किएको बस बस अनिय’न्त्रित भएर लु २ च ७०७२ नम्बरका बोलेरो जिपलाई ठ क्क र दिएको प्रहरीले जना’एको छ। इताजा खबरबाट
November 8, 2020 admin समाचार 6733
लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्त र निशान भट्टराईको आ’वाज रहेको ‘ढाकाटोपी’ बोलको गीत सार्वज’निक गरिएको छ । उक्त गीत शुक्रवार ओएसआर डिजि’टलको आधिकारिक युट्युब च्यान’लबाट सार्व’जनिक गरिएको हो । रघु परियारले रचना गरेका श’ब्दमा माया पिरतीका
May 29, 2021 admin समाचार 3155
April 16, 2021 admin समाचार 3214
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218862)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (210519)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (210209)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205167)